China Oily glue laminating machine KP-YJ128C Manufacture and Factory | I-Kangpa
Ipharamitha yokusebenza ye-KP-YJ128C:
Ukunikezwa kwamandla: 380V 50HZ 3 isigaba
Ububanzi obusebenzayo: 1800mm
Roll ebusweni ububanzi: 1300mm
Ukushisa imininingwane ye-roller: Ø1500 * 1800mm
Esinemthombo indlela: Glue ukudluliswa enamathela
Isivinini sokuklanywa kwemishini: 0-50m / min
Amandla aphelele: 50kw
Ubukhulu (L * W * H): Cishe u-11600 * 2000 * 2200mm
isisindo: Cishe i-6500kg (kuncike kumkhiqizo uqobo)
Umshini wekhompiyutha wokudlulisa iphoyinti we-KP -105X.
Isetshenziselwa ukuhlanganiswa kwezindwangu zokugqoka, uboya obuyi-polar, okungewona uboya, indwangu yokwelula, indwangu engavukiwe, isikhumba, isipanji, indwangu ephothiwe nezinye izinto. Kusebenza ezimbonini ezifana nezingubo, izinto zangaphakathi ezimotweni, izicathulo nezigqoko, imithwalo, ukuhlobisa nezindwangu zasekhaya.
4. Ngokuya ngezimpawu zezinto ezahlukahlukene, amanye amadivayisi angangezwa noma asuswe;
5. Kufanele ukugcoba nokuhlanganiswa kwezinamathiselo ezincibilika emanzini nezincibilikisayo, kuqaphela umsebenzi womshini owodwa onemisebenzi eminingi.
6. Inani leglue kanye nesitayela seglue kungalungiswa ngokuya ngezinto ezibonakalayo kanye nezidingo zangempela.
7. Ukushisa kwesigubhu kungashiswa ngogesi, umusi noma uwoyela oshisayo.
8. Ububanzi be-roller surface yomshini bungacaciswa ngokuya ngobubanzi obukhulu bento yangempela.
9. Uhlelo lonke lungasetshenziswa futhi lulawulwe yi-PLC yohlelo lokuthinta isikrini noma uhlobo lomshini.
Langaphambilini Iglu roller
Olandelayo: Umshini wokusika we-hydraulic ozine
Glue wokulaminetha Machine
Umshini wokunamathisela we-Glue
Amanzi Isekelwe Glue wokulaminetha Machine
Umshini Wokunamathisela Okushisayo Wokuncibilika Okushisayo NgeSitifiketi seCe, Umshini Wokunamathisela we-Pur Hot Melt Glue Nonwoven, Okuzenzakalelayo Hot Melt Glue wokulaminetha Machine, I-Hot Melt Glue Isicelo, Umshini Wokushisa we-Pur Hot Melt Adhesive Laminating, Umshini Oshisayo Wokunamathisela Okushisayo Wengubo Yengubo,